Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ etoola onyeisi ụlọ ọrụ Stanel bụ maazị Stanley Ụzọchukwu maka ime ka mmanụ ụgbọala dị n'uju n'ọdụ mmanụ ụgbọala ya dị n'Ọka, na-ere ya n'ololo lita zuru ezo, ma na-erekwa ya n'ọnụ ego dị otu narị Naịra na iri anọ na ise (N145) maka otu lita, na-agbanyeghị na e nwere ụkọ mmanụ dị egwu n'ala anyị ugbu a, ebe ọtụtụ ndị na-erezịkwa nke ha n'ọnụ ego dị otu narị Naịra na iri asatọ na ise (N185) maka otu lita.
Ụlọ ọrụ Stanel ahụ, bụ ebe a na-ere ma na-emepụtakwa ọtụtụ ihe dị iche iche, nọzịkwa ugbu a wee na-enwe ọtụtụ ụgbọala na ndị mmadụ na-akwụ n'ahịrị n'ahịrị wee na-eche ya bụ mmanụ, n'ihi na o nweghị onye ga-ahụchaa ebe a na-echi ọzọ, gaba ebe a na-arụ agwụ.
Ọ bụ ihe doro anya na ya bụ ụkọ mmanụ bụ nke na-ebi ọtụtụ ụmụafọ Naịjiria aka ọjọọ ugbu a, na-agbanyeghị na gọọmenti etiti na ụlọ ọrụ NNPC kwere nkwa ịgbata ọsọ enyemaka, ọbụnadị tupuu oge ekeresimesi a eruo.
Ụlọ ọrụ Stanel ahụ bụzị ebe onye ọbụla na-agbaje ugbu a, ọbụghị naanị n'ihi na ha nwere lita zuru okè, na-ere mmanụ n'ọnụ ego dị ala; kama ha erekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, na-arụ ọrụ site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, emechighị emechi, ma na-emesokwa ndị ahịa ha nke ọma, na-enyeghị ha mgbakasị ahụ ọbụla.
Ụlọ ọrụ ahụ nọkwara na nso nso a wee gbakwụnye ngalaba ebe a na-eme ndị mmadụ obi ụtọ n'ụlọ ọrụ ahụ, bụkwa ebe a na-ere mmanya na ihe ọñụñụ ndị ọzọ dị iche iche, bụ nke a kpọrọ cafe n'asụsụ bekee.
Gọvanọ Obianọ bụkwa onye maazị Stanley nọrọ na nso nso a wee nabata na ya bụ café, ya na ọtụtụ ndị mmadụ ndị soro ya wee ga, bụkwa ebe onye na-eti egwu a ma ama n'ala anyị bụ Flavour nọrọ wee gụọ gwoo gwoo n'egwu.
Ndị soro gọvanọ wee gaa we bụ ije gụnyere ọka okwu ụlọ ọgbakọ omebeiwu steeti Anambra, bụ ọkaiwu Rita Madụagwụ, ode akwụkwọ ukwu nke steeti ahụ, bụ ọkammụta Sobe Chukwulobelu, ndị kọmishọna, ndị ndu otu pati APGA, tinyere ọtụtụ ndị ukwu ndị ukwu ndị ọzọ.